नेकपा सांगठनिक र वैचारिक रूपको अन्योल छ – राधाकृष्ण मैनाली – Kamdardainik
नेकपा सांगठनिक र वैचारिक रूपको अन्योल छ – राधाकृष्ण मैनाली
November 19, 2019 JB Puri0Comments
० नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य स्थिति जटिल हुँदै जाँदा तपाईंले उहाँले अब विश्राम लिनुपर्छ भन्ने आशय सार्वजनिक गर्नुभएको छ, यो उहाँप्रति शुभेच्छ हो कि बदलाको भावना ?
मैले उहाँसँग केको बदला लिनु र ? मैले उहाँको स्वास्थ्य र देशको अवस्था दुईवटै हेरेर यो धारणा सार्वजनिक गरेको हुँ ।
० देशको अवस्था जटिल कुन आधारले भन्दै हुनुहुन्छ ?
जटिल छ नि । एकातिर नेकपाको दुई तिहाइको सरकार छ । केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्म सबैतिर चुनाव सम्पन्न भएर नेकपामय भएको अवस्था एकातिर छ भने माथि पार्टी एकीकरण भइसकेपछि वैचारिक एकीकरण भइरहेको छैन । नेतृत्व कसलाई सुम्पने भन्ने टुंगो पनि भएको छैन । यसले एकातिर सांगठनिक र वैचारिक रूपको अन्योल छ, अप्ठ्यारोपन छ भने अर्कोतर्फ उहाँको स्वास्थ्य स्थिति साँच्चै नै जटिल छ । मैले सार्वजनिक रूपमा भनिदिएको के हो भने उहाँलाई अझै पनि सरकारमा टाँसिरहुँ भनेर कसैले भनिदियो भने त्यो उहाँमाथिको साँच्चै अन्याय हो ।
० कसरी ? पछिल्लो समय उहाँको सक्रियता त झन् बढिरहेको छ नि ?
उहाँ रोगी त धेरै पहिलेदेखि नै हो । जेलमा पनि रोगका कारण साह्रै सकस थियो उहाँलाई । उबेला युवा हुनुहुन्थ्यो । युवा बेलामा योभन्दा जटिल शारीरिक अवस्था हुँदाहुँदै नि युवापनले र उहाँको बाँच्ने जिजीविषाको जुन उच्च मनोबल हो त्यसको उचाइले पनि धेरै काम गरेको थियो । अब शारीरिक रूपले पनि उहाँ धेरै प्रौढ हुनुभयो । त्यसमाथि मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरेकै १२ वर्ष भयो । त्यसमा पनि किड्नी फेल भएर डाइलोसिस गरेर जाँदा साह्रै जटिल हुन्छ । हप्तामा तीनचोटि लाइलोसिस गर्नुपर्दा समय पनि रहँदैन । शरीर पनि भनेजस्तो सक्रिय हुँदैन । पुनः प्रत्यारोपण नै गर्नुप¥यो भने पनि झन् अर्को ठूलो समस्या । त्यही भएर यी सबै कुरा हेरेर मैले उहाँ अझै बाँचेर, चेतना सक्रिय बनाएरै नेकपा, यो सरकार र यो देशलाई अभिभावकत्व दिएर रहनुभयो भने सायद अलि सजिलो होला भन्ने मनशायका साथ मैले उहाँलाई पदीय दायित्वको जो कार्यकारी भूमिका छ, त्यसबाट अलि निष्क्रिय हुुनुपर्छ भन्ने धारणा राखेको हुँ । अलि दौडधुप र धपेडी कम गर्नुभयो भने सायद उहाँकै स्वास्थ्यलाई राम्रो होला भन्ने मेरो आशय हो । उहाँले विश्राम लिँदा पार्टी, सरकार र देशलाई नै पनि उहाँले अलि लामो समयसम्म अविभावकत्व दिन सक्नुहोला भन्ने आशा र भित्री सदाशयतापूर्वक मैले त्यसो भनेको हुँ । त्यो नगर्ने र उहाँ सिसीघिटी त्यहाँ नै रहने हो भने अहिलेसम्म जति उहाँको प्रतिष्ठा छ, त्यसमा उहाँको दुर्नाम बढेर जान सक्ने खतरा छ ।
दिनदिनै शरीर गल्दै गएपछि त समस्या भइहाल्छ नि । दिनका दिन कुद्दा त यो दशा छ देशमा । उहाँले जति प्रगति भयो भने पनि आममानिसले प्रगति महसुस गर्न नसकिरहेको सन्दर्भमा झन् उहाँ नै निष्क्रिए भएर गएपछि सबै विपक्षी शक्तिहरू अथवा विकृति–विसंगतिहरू मौलाएर अगाडि जान्छन् । त्यसले उहाँको जुन अहिले भइराखेको प्रतिष्ठा छ, त्यो पनि गुम्छ । त्यस आशयले उहाँको पनि राम्रै होस् भन्ने मनशायका साथ हामीले भन्ने कुरा भनेका छौं । मान्ने नमान्ने भने उहाँको कुरा हो ।
० उहाँले सार्वजनिक रूपमा मेरो आत्मबल उच्च छ, म तन्दुरुस्त छु भनेको अवस्था छ नि ?
उहाँ जेलमा ३०–३२ वर्षको युवा रहँदा शारीरिक अवस्था पनि ठीक थिएन । झनै कमजोर हुनुहुन्थ्यो । उहाँ आफैं बाथरुम जान सक्ने अवस्था पनि थिएन । उठ्न, सुत्न र नुहाउन नसक्ने अवस्था थियो । त्योभन्दा अहिले ज्यादै राम्रो अवस्था हो । त्यस आधारमै उहाँलाई म हृष्टपुष्ट छु, हिँड्न सक्ने अवस्था छ भन्ने पनि लागेको होला । तर त्यतिखेर उहाँको मनोबल उच्च थियो । मनोबल उच्च भएको अर्को कारण के हो भने उहाँको युवा अवस्था पनि थियो । औषधि र उच्च मनोबलले उहाँले त्यतिखेरको रोग पछार्नुभयो । अहिले उहाँ उमेरको हिसाबले पनि प्रौढ हुनुभयो । शरीर अति जीर्ण रूपमा छ । तसर्थ, हिजोकै अवस्था सोचेर अहिले पनि म रोगलाई पछार्छु भन्न त्यति सजिलो हुँदैन । अहिले पनि बाँच्ने जिजीविषा र मानसिक सक्रियता त उहाँको राम्रै होला । तर शारीरिक रूपले त्यसलाई धान्दैन । आज भन्दा ५–६ महिना पहिले उहाँ पर्याप्त सक्रिय भएकै बेलामा त भनेजस्तो देश हाँकिएको छैन, जुन कुरा उहाँ आफैंले अनुभूति गर्दै आउनुभएको छ । कतिपय सन्दर्भमा कर्मचारी प्रशासन र मन्त्रिमण्डललाई कागज गराएर अनेक गर्दा पनि उहाँको सोचाइअनुसार विकासका कुराहरू दौडिएका त छैनन् । आममान्छेका जीविकाका कुरा त उठिराखेका छैनन् । यस्तो बेलामा अझ निष्क्रिय भएर जानुभयो भने त विकृति मात्रै अगाडि आउँछ । उहाँको उपस्थितिमा र उहाँको अनुपस्थितिमा पनि धेरै नेपाली उहाँप्रति खुसी रहून् भन्ने आशाका साथ मैले यो कुरा भनेको हुँ । तर उहाँको स्वभाव अहिले जे भने पनि नकारात्मक बुझ्ने खालको रहेको देखिन्छ । त्यही स्वभावले उहाँलाई राम्रै सोचेर भन्दा पनि उहाँले गलत ठान्दिनुहुन्छ । त्यही सोचाइले उहाँलाई पनि संकट, देशलाई पनि संकट अनि सिस्टमलाई पनि संकट भन्ने मलाई लाग्छ ।
० एकाथरीले त अमेरिकी राष्ट्रपति रुजबेल्टको उदाहरण दिँदै उहाँले ह्विलचियरमा बसेर पनि देश चलाएका थिए भनेर पनि तर्क गरिरहेका छन् ?
उहाँका वरिपरि रहनेहरूलाई त उहाँलाई टेकेर आफ्नो पोजिसन बनाइरहन मन छ । त्यसैले तिनीहरूले त्यो भन्नु स्वाभाविक हो । आफ्नो व्यक्तित्वका कारण उनीहरू वरिपरिक घुमेका छैनन् । वलिजीकै व्यक्तित्वका कारण वरिपरी घुमेर कमाइगरी खाएका छन् भने उनीहरूले त जसरी हुन्छ घेराबन्दी गरेर जानेभन्दा परतिरको त कुरा नै सोच्दैनन् नि । मनमोहनजी त्यस्तो वृद्ध अवस्थामा चुनाव प्रसारमा जानै नसक्ने अवस्थामा हुँदा त लखेटेर गोठाटार पु¥याएर मुर्छा पार्ने स्थितिमा त्यहाँका कार्यकर्ताले बनाए । त्यही शैली त हो नि । त्यही शैलीले उहाँलाई अहिले पनि सकिनसकी जबर्जस्त हिँडाएर केही फाइदा लिन केही तत्व त लागेकै होलान् । त्यसबाट उनलाई फाइदा होला तर देशलाई फाइदा हुँदैन । मलाई ओलीजीको स्वास्थ्य फाइदा भयो भने देशलाई नै फाइदा हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।
० उहाँले अहिल्यै विश्राम लिने हो भने त्यसपछि पार्टीचाहिँ कसरी अघि बढ्ला ? झन् संकट निम्तिदैन र ?
नेकपाभित्रैका नेकपा र सरकार दुवै चलाउने हैसियतका नेताहरू त्यहाँ खासगरी माधव नेपाल–प्रचण्ड कामरेड नै हो । उहाँहरू सत्ताका विकल्पका रूपमा अगाडि आएका छन् । उनीहरूलाई माइनस गरेर अब नेकपा चल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यदि सकारात्मक कोणबाट सोच्ने हो भने उनीहरूसँग सहमति गरेर यो संकटको बेलामा सहकार्य गरे ओलीजी अगाडि जानुभन्दा अर्को विकल्प पनि छैन । होइन, अहिले पनि गुट नै चलाउने कुरा सोच्ने हो भने सायद उहाँलाई उहाँको स्वास्थ्यले पनि साथ दिँदैन । त्यो गुटले पनि पार लगाँउदैन । जसले गर्दा नेकपामाथि अझ ठुलो संकट आँउछ, अनि त्यो संकटले बिस्तारै देश र सिस्टममाथि नै घेर्छ । त्यो सबै मनशाय राखेर मैले उहाँलाई सद्भावपूर्ण रूपले आफू सजिलो अवस्थामा जानुस् । स्वास्थ्यलाई बचाउनुस्, नेकपालाई उठाउनुस्, सरकारलाई टिकाउनुस्, सिस्टमलाई बचाउनुस् भन्ने आशयले मैले यो सल्लाह दिएको हुँ ।
० प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वास्थ्यका कारण विश्राम लिने अवस्था आइपर्दा पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा उहाँले अगाडि सार्नुपर्ने व्यक्तिहरू को–को हुन सक्छन्, स्पष्ट रूपमा बताइदिनुहोस् न ?
एकदमै माइक्रो लेबलमा त म जान चाहन्नँ । किनकि, म आफैं दुइ–चार वर्षदेखि त्यहाँ जोडिएको पनि छैन । मुलभूत रूपमा अहिले त्यहाँको शीर्षस्त नेताहरूमध्येमा प्रचण्डजी नै हुनुभयो, किनकि उहाँ पार्टी एकीकरणबाट आएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । त्यही रहिराखेर लामो समयदेखि एमाले चलाएको माधवजी हुनुभयो । अब यो विकल्पलाई नै अगाडि लिएर आएर जान सकिन्छ । त्यसो त अरू नेताहरू पनि नभएका होइनन् । वामदेव पनि छन्, अमृत बोहोरा पनि छन् । ईश्वर पोखरेल पनि छन् । अब दोस्रो पुस्ता, तेस्रो पुस्ता हुँदै अगाडि जाने कुरा हो । मुख्य तीनजना नेताका बीचमा समझदारी बनाउँदै सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया उहाँले थाल्नुभयो भने राम्रो हुन्छ ।
० भनेपछि प्रचण्ड र माधव नेपालमध्ये एकजनालाई पार्टी र अर्कोलाई सरकारको नेतृत्वमा अघि सार्नुपर्छ भन्ने हो तपाँइको आशय ?
दुईवटामध्ये सल्लाह गरेर कसलाई हुन्छ । उसको नाममा सहमति जुटाएर, त्यसलाई अघि सार्नुप¥यो । मैले फलानोलाई भनेर तोक्दैमा हुने कुरा होइन । दुईवटा महत्वपूर्ण पद ती दुई व्यक्तिलाई नै तोक्दा राम्रो होला । तर, उहाँलाई आवश्यक मान सम्मान, आर्थिक हैसियत तथा अन्य जिम्मेवारी राज्यले नदिनुपर्ने कुनै काण त छैन, मैले त खाली सक्रियता र राजनीतिक दौडधुप घटाएर स्वास्थ्य बचाउनुस् भनेको मात्र हुँ । उहाँकै कारण सरकार दुई तिहाइमा आएको भन्ने कुरा त स्विकारेकै छन् । त्यसैले त्यस रूपले अगाडि जाने हो भनेचाहिँ सुखद पक्ष हो । त्यसो होइन, घण्टी बजाउँदै जान्छु, जहाँ गएर विश्राम हुन्छ, त्यही गएर घण्टी छोडिदिन्छु भन्ने हो भने त्यसले देशलाई पनि फाइदा गर्दैन, स्वयं उहाँकै व्यक्तित्वलाई पनि फाइदा गर्दैन ।
० ईश्वर पोखरेललाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री दिएर जानुपर्ने कुरा पनि गाइँगुइँ सुनिन थालेको छ नि ?
मैले त्यो कुरा पनि सुनेको हुँ । बिस्तारै ओलीजीका नजिकका मान्छेहरू सरकारमा ईश्वरजीलाई अनि पार्टीमा वामदेवजीलाई लिएर उपाध्यक्ष बनाउने अनि कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउने भन्ने कुरा पनि उठेका रहेछन् । व्यक्तिगत हिसाबले उहाँहरू व्यक्तित्व नै होइन त म भन्दिनँ तर त्यसरी नेकपा चल्दैन । अहिलेको नेकपालाई त्यो रूपमा सोचियो भने नेकपाभित्र संकट आउँछ । पार्टी एकतालाई प्रभाव पर्छ । सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ । जसले गर्दा त्यो संकटले के–के हान्छ, त्यो पछिल्ला कुरा हुन् । अहिलेको तत्कालीन सत्तामा माधव र प्रचण्डजीबाहेक अरूलाई ल्याउन खोजे भने त्यो संकट निम्त्याउने कुरा हो । दुई प्रमुखबाहेक अन्य बाँकी पदहरूमा अन्यलाई पनि समेट्ने ठाउँ छ ।
० सैद्धान्तिक विषय पनि उठिरहेको छ । यसले बिस्तारै नेकपामा समस्या पार्दैन ?
हो, जनताको बहुदलीय जनवाद अर्थात् जबजका पक्षधरबाहेक अरू त नेकपा नै होइनन् भन्ने ठान्ने हो भने त्यो संकट निम्त्याउने कुरा नै हो ।
० एकता प्रक्रिया यसरी ढिलो हुनुमा को जिम्मेवार छन् ?
अझै केन्द्रीय निकाय बनेको छैन, पोलिटब्युरो गठन भएको छैन । यसमा मुल कमजोरी त पार्टी अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री ओलीजीकै हो । यसमा अरूलाई दोष लगाउन सकिँदैन । मूलकुरो यो पार्टी एकता भनेकै सत्ताको एकता मात्र भयो । सत्तामा बाँडफाँड गर्ने एकता मात्र भयो । सैद्धान्तिक एकता भएन । अहिले पनि पार्टी स्वरूपमा वैचारिक एकता भएकै छैन । जबज नै चाहिन्छ भन्ने एउटा धार छ अर्थात् हिजोको पूर्वएमाले नै हाबी हुनुपर्छ भन्ने एउटा धार छ भने भोलि सबै मिलेर जानुपर्छ भन्ने अर्को धार छ । अहिले पनि त्यसलाई वैचारिक मन्थन गरेर कसरी जाने भन्ेर नयाँ स्वरूप र नयाँ वैचारिक ढाँचा दिनु त स्वाभाविकै हो नि । अहिले पनि बाजा आ–आफ्नो पाराले बजाउँदै आएका छन्, एकता पछाडि साँच्चै एकताका स्वर यी होइनन् । यी त एकता पछाडिका अनेकताका स्वर हुन् । यसले त संकट निम्त्याउने मात्रै हो ।
० सराकार गठन भएको करिब दुई वर्ष पुग्न लाग्यो, सरकारको कामको मूल्यांकन कसरी गर्नुभएको छ ?
पेपरमा के लेख्नुभयो त्यो आफ्नो ठाँउमा छ । आम मान्छेले सरकार बनिसकेपछि राहत अनुभूति गरे कि गरेनन् भनेर हेर्ने हो । हिजोभन्दा नयाँपन देखे कि देखेनन, अनुभव गरे कि गरेनन् भनेर मुख्यगरी सरकारलाई त्यहाँ जाँच्ने हो । १०–२० वर्ष पछाडिका योजनाले केही बौद्धिक वर्गलाई प्रभावित पार्न सक्ला तर आममानिसलाई प्रभाव पार्न सक्दैन । अहिलेसम्म सरकार बनिसकेपछि न यहाँ गरिबी घटाउने काम भएको छ, न रोजगारी उत्पादन गर्ने काम भएको छ, न शान्ति सुरक्षा राम्रो छ । यहाँसम्म कि काठमाडौंको भत्काएको सडक मात्र पनि बनाउने काम भएको छैन । स्वयम्भू सीतापाइलाकै बाटो भत्काएको तीन वर्ष भयो, कसैले बनाउँदैन । अन्य बाटाहरूकै हालत उस्तै छ । भएका र भत्काएकै बाटा टाल्ने काम भएको छैन भने रेल र पानीजहाजका कुरा त छोडिदिनुस् न ।
प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्ण पाठ
February 15, 2019 JB Puri 0
April 27, 2019 JB Puri 0
निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषलाई कोरोना नियन्त्रण तथा प्रतिरोध कोषमा राखौँः सांसद श्रेष्ठ
April 14, 2020 JB Puri 0
नागरिक, अनागरिक र अङ्गीकृत नागरिकताको चर्चामा नेपाली राजनीति
कोरोनाको कहरमा नेपाली अर्थतन्त्रको स्थिति र आगामी अर्थ निति
भारतीय गोदी मिडियामा गोएबल्स ट्रोल र पित पत्रकारिताको प्रचुरता
बनाएर राखेको अवस्थामा कहाँबाट पैसा ल्याएर तिर्ने कर?
July 4, 2020 JB Puri 0
काठमाडौं,२०असार। सिन्धुपाल्चोकका केही औषधि पसलले लकडाउनको फाइदा उठाउँदै वढी मूल्य लिई औषधि विक्री गरेको भेटिएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय
July 3, 2020 JB Puri 0
चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य सेवा
July 1, 2020 JB Puri 0
June 22, 2020 Santosh Khadka 0
सन्तोष खड्का कामदार दैनिक द. कोरियामा संचालित जिन एयरले इन्छन – काठमाडौँ – इन्छन चार्टर उडान गर्ने भएको छ। ३०
५० हजार पिसीआर किट प्रदान
June 16, 2020 JB Puri 0
June 1, 2020 JB Puri 0
कोरियाअपडेट प्रवास वैदेशिक रोजगार
May 29, 2020 JB Puri 0
South Asia UPF is going to hold webinars on the topic of “Rethinking South Asia’s Future in Post Coronavirus World”
May 29, 2020 Santosh Khadka 0
Kathmandu, kamdardainik UPF-South Asia is going to hold Peace Talks webinars on the topic of “Rethinking South Asia’s Future in
Ashra appointed as the Brand Ambassador for the Agricultural Development Bank Limited
May 14, 2020 Santosh Khadka 0
Can Korea’s model for fighting coronavirus be global model?
May 7, 2020 JB Puri 0
Let us work to beacircle of light [a “corona”] in the darkness:UPF
April 7, 2020 Santosh Khadka 0
कागेश्वरी मनोहरा ८ काठमाडौँ सम्पादक : सन्तोष खड्का
© २०१८ - २०२० kamdardainik.com सर्वाधिकार सुरक्षित